zvichibva pakudiwa, aya ndiwo mavara anozivikanwa kwazvo eiyo 5g apple iphone 12 pro max
Kuru Nhau & Ongororo Zvichienderana nezvinodiwa, aya ndiwo mavara anozivikanwa eiyo 5G Apple iPhone 12 Pro Max
Zvichienderana nezvinodiwa, aya ndiwo mavara anozivikanwa eiyo 5G Apple iPhone 12 Pro Max
Pre-maodha e iyo Apple iPhone 12 mini uye iyo iPhone 12 Pro Max yakatanga neChishanu nemafoni ese ari maviri akarongerwa kusvika muzvitoro kudzimba dzevatengi uye muzvitoro musi waNovember 13. Kushanyira Apple & apos; s webhusaiti , tinogona kutarisa kune rumwe ruzivo rwakatumirwa nemugadziri kuti tisvike pamhedziso. Tisati tasvika kune idzodzo, unogona kutarisa misi mitsva inofungidzirwa yekuendesa yemhando dzisina kuvhurwa dzeiyo iPhone 12 mini uye iPhone 12 Pro Max pazasi:
128GB-Mbudzi 25th-Zvita 1
128GB-Zvita 1-Zvita 8
256GB-Mbudzi 25th-Zvita 1
256GB-Zvita 1-Zvita 8
512GB-Mbudzi 25th-Zvita 1
512GB-Mbudzi 23rd-Mbudzi 25
256GB-Mbudzi 27th-Zvita 2nd
Saka chii chatakadzidza kubva pane iyi data? Iyo Goridhe nePacific Bhuruu shanduro dzeiyo iPhone 12 Pro Max ndiyo inonyanya kufarirwa mamodheru kunyangwe paine zvimwe zvishoma kushomeka kwezvikwata zvakabata 512GB yekuchengetera mune chero eayo maviri mavara. Hapana chimwe chevashanduri vePro yemhuri ye iPhone 12 yakarairwa nhasi ichauya musi waNovember 13 kuburitswa. Kana iri iyo iPhone 12 mini, ese mavhezheni eiyo 64GB uye 128GB mamodheru acharamba achisvika musi waNovember 13 kuburitswa zuva kana akarairwa nanhasi. Nekutumirwa kwema256GB emhando muWhite neBlack kunonoka kusvika chero munaZvita 2, iwo maviri mavara ndeaanozivikanwa kwazvo kune 5.4-inch musiyano wefoni.
Iyo 128GB vhezheni ye iPhone 12 Pro Max inotengeswa pamadhora 1,099 kana makumi maviri nemana ekubhadhara pamwedzi pamadhora 45.79. Iri ndiro gore rekutanga iro Apple ine yakasarudzika dhizaini yeimwe yayo iPhone mitsara inotangira pa128GB. Iyo 256GB iPhone 12 Pro Max inokumhanyisa $ 1,199 kana $ 49.95 pamwedzi pamusoro pemwedzi makumi maviri nemana. Uye iyo 512GB vhezheni yetsamba inotengeswa pamadhora 1,399 kana makumi maviri nemana ekubhadharwa kwemwedzi pamadhora 58.29.
Iyo Apple iPhone 12 mini inopihwa ne64GB, 128GB uye 256GB yekuchengetedza zvakateerana. Iyo 64GB vhezheni yakaiswa pa $ 729 kana $ 30.37 pamwedzi pamusoro pemwedzi makumi maviri nemana. Iwo 128GB mamodheru akatemerwa mutengo pa $ 779 kana iwe unogona kuita makumi maviri nemana kubhadhara pamwedzi kwe $ 32.45. $ 879 ichakubata iyo 256GB iPhone 12 mini, kana iwe unogona kusarudza kubhadhara $ 36.62 pamwedzi pamwedzi makumi maviri nemana.
samsung galaxy note 5 rangarira
kuverenga json faira muJava
lg v30 zuva rekuburitsa mu usa
5 yeanonyanya kuseka kumeso swap maapplication eApple neIOS
Samsung Gear S smart-tarisa maoko-on
Spotify inowedzera yechokwadi rwiyo runyorwa kusanganisa pane Android uye iOS zvishandiso
Sprint inokwereta yakakurumbira T-Mobile Chipiri freebie kupa mubairo kune vatengi vayo kushivirira
Yakanakisa Chirangaridzo Zuva rinobata pane mafoni
Samsung Gear S4 mutengo uye zuva rekuburitsa: zvatinotarisira
Dhawunirodha S3 Zvinhu NePython neBoto 3
Samsung Galaxy Tab S8 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Kuchenjerera: iyi vhidhiyo yekubatanidza inokanganisa yako iPhone!